China Briefcase T-L5188 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
Bhegi bhegi T-L5188
TIGERNU yechinyakare dhizaini yakawanda inoshanda bhegi
Iyo 2020 yechando Series kabhegi dhizaini kubva kuna Tigernu, yakapusa asi fashoni uye yazvino
Chinyorwa: Yakagadzirwa nesplashproof & kukwenya isingadziviriri nylon uye 210D polyester sekumhara, yakasimba kwazvo uye inoshamwaridzika nharaunda. Iwo zipi ari emhando yepamusoro uye kuputika chiratidzo, anogona zipper uye unzipper nyore. Yese mabheji uye zvishongedzo zvakagadzirwa neTIGERNU logo, mhando yepamusoro uye yakasimba.
Saizi: 43 * 16 * 31cm (L * W * H) .Imwe yakapfekerwa 15.6inch laptop mupanda nehombodo diki diki dzePadad yako, makadhi ebhizinesi, zvinyoreso, mapepa uye mafaera. Chimwe chikamu chikuru chine mashandiro akasiyana. Zvidimbu zvitatu zvakapatsanurwa zvinobviswa zvinogona kugadziridzwa uye nekupa kumwe kudzivirirwa kune yako kamera michina. Mukati mune zippered mesh homwe yezvishongedzo, iPad uye mamwe mapiritsi nezvimwewo. Inogona kushandurwa nyore nyore kuita bhajeti rakapfava rakatwasuka reguta nekubvisa makamuri epakamuri. Yakanyanya nyore kushandisa kwezuva diki nzendo, pane nzvimbo yakakwana yega magiya. Zviripachena kuti dema dema rinonyanya kushanda mukushandisa kwemazuva ese.
Feature: Splashproof zvinhu zvinodzivirira zvinhu zvako kubva pakunyorova kubva kunaya.Nzira mbiri kushandisa sechanza-kutakura bhegi uye rimwe bhegi mutumwa bhegi. Inobviswa uye inogadziriswa bhandi repapfudzi. Kukura kwakakura kwezvaunoda zuva nezuva.
Sarudza bhegi reTigernu, nakidzwa nebasa rako uye nekufamba
Model Nhamba T-L5188
Type: Nyaya pfupi
Kurongedza: 10pcs / Carton
Saizi: 43 * 31 * 16cm
Feature: Inosvikika mupanda
Pashure: Mukwende T-B3982
Zvadaro: Crossboy bhegi T-S8113